Colombia: Jabhadii FARC oo codod yar ka heshay doorashadii Baarlamaanka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Colombia: Jabhadii FARC oo codod yar ka heshay doorashadii Baarlamaanka
Colombia: Jabhadii FARC oo codod yar ka heshay doorashadii Baarlamaanka
March 12, 2018 - By: HORSEED STAFF
Xisbiga cusub oo ay sameysteen kooxdii FARC oo ahayd jabhadii ka dagaalami jirtay dalkaasi ayaa Axadii shalay markii ugu horeysay ka qeyb galay doorashada Labada Aqal ee Kongareeska dalkaasi.
Heshiiskii dhexmaray dowlada Colombia iyo Jabhada FARC bishii November 2016 ayaa qeexayey in kooxdaasi 10 kursi ka heli doonaan labada aqal, 5 kursi golaha Senate-ka iyo 5 kursi golaha hoose.
Balse xisbiga cusub ee FARC ayaa caqabado badan kala kulmay ololihii doorashada, iyagoo sheegay in xisbiyadii horey usoo jiray ay carqaladeeyeen ololahooda ay doonayeen inay shacabka ugu gudbiyaan qorshahooda.
Xildhibaanada u sharaxan xisbigaasi cusub ee FARC ayaa qaarkood cadaadis kala kulmay shacabka ay horey dadkooda u xasuuqeen jabhadaasi kuwaasi oo goobo badan ka hor joogsaday inay khudbado kasoo jeediyaan dagaalyahanadii FARC ee hada siyaasiyiinta isu bedalay.
Xisbiga FARC ayaa doonayey inay codod dheeraad ah helaan, balse meysan helin codod badan, inkastoo 10ka kursi oo horey loogu qoondeeyey aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin natiijada codbixintii shalay.